Wasiirka warfaafinta oo ka hadllay waxqabadka dowladda todobaadkii tagay Hiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Wasiirka warfaafinta oo ka hadllay waxqabadka dowladda todobaadkii tagay
Muqdisho : HN :– Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow ayaa ka warbixiyey waxqabadka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Deeq Raashin ah oo la gaarsiiyey Baraawa, Dekedda Muqdisho oo Walxaha Qarxa lagu qabtay, Shirka Maamul u sameynta Koofur Galbeed, Qorshaha Xasilinta Dalka, Xafladda Wadajirka ee AMISOM iyo Ciidanka XDS, Booqashadii Taariikhiga Aheyd ee Ban-Ki-Moon, Kulanka Wadatashiga Dhalinyarada iyo Sii deynta todobada Hindiga oo Afar sano afduub loo heystay.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Deeq raashin ah oo la gaarsiiyey Barawa ayaa yiri “Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 28kii Oktoober 2014 dadka ku nool degmada Baraawe halkaasi oo ka mid ah magaalooyinka dib gacanta dowladda ugu soo laabatay. Deeqda raashiinka oo ka kooban Bur iyo Bariis ayaa la guddoonsiiyay dadka ku nool magaalo xeebeedka degmada Baraawa ee Gobolka Shabeelaha Hoose, kuwaasi oo ay haysatay xaalado nolol xumo kahor inta aysan ciidamada Xoogga Dalka oo kaashanaya kuwa AMISOM aysan halkaasi ka saarin kooxda Al-Shabaab. Gaashanle Dhexe Xasan Maxamesd Abuukar oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada Xoogga Dalka ee la socatay mucaawinada ay ku dadaaleen in raashiinkaasi si nabad ah ay ku gaarsiiyaan degmada Baraawe ee gobolka Shabelaha Hoose. Deeqdan ayaa ah horudhac kaalmooyin kale oo ay qorsheynayaan inay gaarsiiyaan dadka ku nool Gobolka Shabeelaha Hoose.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Walxaha Qarxa oo lagu qabtay Dekedda Muqdisho ayaa yiri “Ciidamada Booliska ee Dekadda ka howlgalla ayaa gacanta ku dhigay konteenar ay ku jiraan waxyaabaha loo adeegsado qaraxyada iyo qalabka ay isticmaalaan ciidamada, iyadoo la qabtay xilli la isku dayay in qalabkaasi dekadda laga bixiyo. Taliyaha Saldhigga Booliska Dekadda Muqdisho Gaashaanle Sare Maxamed Cabdi Eeboow ayaa sheegay in xubin ka tirsan ciidanka ilaaalada canshuuraha uu qabtay kunteenarkan xilli ay ku guda jirtay kormeer ay ku smaeyneysay qalabka dekadda la soo geliyo iyo kuwa ka baxaya. Wasiirka Amniga Qaranka Mudane Khaliif Axmed Ereg oo gaaray dekadda Muqdisho ayaa sheegay in dadaal ay sameeyeen ciidamada amniga lagu guuleystay in la qabto konteenarka, isagoo intaa ku daray in guddi baaritaanno dheeri ah sameeya ay u saareen, si loo ogaado cidda dalka soo gelisay. Shirkadda BIL oo ay u rarneyd qalabka la qabtay ayaa baaritaano lagu wadaa. Konteenarka ayaa waxaa ku jiray dhar, kabo milateri iyo qalab magned ah oo fududeeynaya waxyaabaha qarxa. Markabka ayaa ka yimid Dalka Shiinaha. isla markaana dekadda Muqdisho ku soo xirtay 22-kii Oktoober gacantana lagu dhigay qofkii uu u rarnaa badeecadaan.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Shirka Wadatashiga iyo Maamul u Sameynta Maamul Goboleedka Koofur Galbeed ayaa yiri “Madaxwayanaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa 28kii Oktoober si rasmi ah u furay shirka Maamul u Sameynta Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa horey u sii joogey Baydhabo oo uu kulamo wadatashiyo la yeelanayey dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Furitaanka Shirka waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan labada Gole ee Dowladda, Wakiilada beesha Caalamka u jooga Soomaaliya, ergo ka kala socda deegaanka iyo marti sharaf kale. Salaadiinta ayaa hoosta ka xariiqay in ay aad ugu faraxsanyihiin in la gaaray waqtigii la dhisi lahaa Maamulka KMG ah ee Koonfur Galbeed. Safiirka Denmark ee Soomaaliya ayaa sheegay in 19ka November ay Copenhagen ku qaban doonaan shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, sheegeyna inuu ku faraxsanayahay horumarka Dowladda. Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay Nicholas Kay ayaa sheegay in QM ay gacan ka geysan doonto shirka inta uu socda, ayna soo dhaweynayaan qodobada ka soo baxa shirka. Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa u mahadceliyay Madaxda Dhaqanka iyo doorkooda, isagoo dalbaday in la wadahalsiiyo Maamulka Jubba iyo Maamulka Koonfur Galbeed ee la dhisayo. Madaxweynaha oo si rasmi ah u furay shirka ayaa ergeda ugu baaqay inay ka fekeraan mustaqbalka bulshada ku nool deegaannada Maamulka Koofur Galbeed, waxaana uu beesha caalamka uga mahadceliyay doorkooda qabsoomidda shirka. 380 ergo ayaa meel marin doona dastuurka u degsan Maamulka Koonfur Galbeed iyo doorashada hoggaanka maamulkaasi.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Qorshaha Xasilinta Dalka ayaa yiri “Ciidamada Amniga ayaa 28kii Oktoober howgalo ballaaran ku soo qabtay hub iyo dadkii heystay kaddib howl gallo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Ciidamada ayaa soo qabtay sagaal qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Guri ku yaalla degmada Dayniile ayaa laga helay hub badan oo dhulka ku duugnaa iyo dhowr qof oo ku sugnaa guriga. Degmada Howl-Wadaag ayay ciidamadu sidoo kale ka sameeyeen howl-galka, dhowr qof oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa laga soo qabtay xaafadaha u dhow suuqa Bakaaraha ee degmada Howl-Wadaag. Maalmo ka hor ayay ciidamada Nabad-sugiddu gacanta ku soo dhigeen dhallinyaro laga keenay gobollada oo ay Al-Shabaab doonayeen inay falal amni darro ka sameeyaan Gobolka Banaadir, kuwaas oo ku sugnaa guri ku yaalla degmada Howl-Wadaag.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Xafladda Wadajirka ee AMISOM iyo Ciidamada Dowladda oo lagu soo bandhigayey guulaha dagaalka militariga ayaa yiri “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 27kii Oktoober ka qeyb galay xaflad lagu soo bandhigayey guulaha ay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ka gaareen howlgalka badweynta Hindiya. Munaasabadda waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maman Sidikou, Taliyaha Ciidanka AMISOM Silas Ntigurirwa iyo marti sharaf kale. Howlgalka badweynta Hindiya ayey ciidamadu ku guuleysteen gacan ku dhigidda magaalooyin dhowr ah, sida Baraawe, Jala-laqse, Buulo-mareer, Ceelbuur, Cadale, Kudhaa iyo kuwa kale. Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho-qarshe” ayaa tilmaamay in howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyada Al-Shabaab ay bar bar socdeen dib u dhiska ciidanka, ayna sii wadayaan xoojinta dib u dhiska ciidanka. Madaxweynaha oo munaasabadda soo xiray ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay ahmiyadda koowaad siineyso ciidanka, isla markaana ay xoogga saari doonto ka warqabkooda guud ahaan iyo gaar ahaanba. Mudane Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in muddo lixdan cisho ah loogu kordhiyay waqtigii ay dowladdu u qabatay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya gacanta Dowladda, waxaana uu xusay in dhalinta ay qaldeen Al-Shabaab ay markale haystaan fursado ay isku soo dhiibi karaan. Madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay Cidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM guulaha ay ka soo hooyeen howlgallada badweynta Hindiya, waxaana uu ku booriyay in ay sii labo jibaaraan howgalkaasi dib gacanta dowladda loogu soo celinayo deegaannada fara ku tiriska ah ee ay ku dhuumaaleysanayan kooxda Al-Shabaab.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey booqashadii taariikhiga aheyd ee Xoghayaha Guud ee QM iyo mas’uuliyiin kale ee Muqdisho 29kii Oktoober 2014 ayaa yiri “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa Muqdisho ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon, Madaxweynaha Bankiga Adduunka, Jim Yong Kim, Madaxweynaha Bankiga Horumarinta Islaamka, Axmed Maxamed Cali, iyo wakiillo sarsare ee ka socda Bankiga Horumarinta Afrika, Midowga Afrika, iyo Midowga Yurub. Xoghayaha Guud ee QM ayaa ugu horeyn u mahadceliyay Madaxweynaha Soomaaliya sida diiran ee uu ugu soo dhaweeyay Muqdisho, isagoo sheegay in ay wax badan iska badaleen dalka ayna kala duwantahay sanadkii 2011-ka iyo sanadkan 2014. Ban Ki Moon ayaa sheegay inuu xambaarsan yahay labo fariimood, tan kowaad waxaan ognahay siyaasadda, dowlad wanaagga, amniga iyo horumarka wax badan oo la taaban karo ayaa iska badalay, tan labaad Qaramada Midoobay, Bankiga Adduunka iyo weliba bulshada caalamka guud ahaan waxaa ka go’an inay dadka Soomaaliyeed gacan siiyaan. Soomaaliya waxay ku taagantahay waddada saxda ah. Waxaan halkan u joognaa inaan u sheegno Soomaalida inaysan keligood ahayn iyo inaan laballaabi doono dadaalka aan ugu jirno inaan ku kaalmayno si ay u ilaaliyaan guulaha la gaaray sannadihii dhowaa. Madaxweynaha Bankiga Adduunka, Jim Yong Kim ayaa sheegay in Soomaaliya ay heysato fursad aan lahayn wax loo dhigo oo ay dalka iyo guud ahaan Geeska Afrikaba sare ugu qaadaan hab nololeedka dadka iyagoo ka qaybgelinaya hawlaha wax soo saarka dhaqaalaha. Xasillooni siyaasadeed iyo amni waxay shuruudo muhim ah u yihiin yareynta saboolnimada xad dhaafka ah iyo kordhinta barwaaqo ay wadaagaan dadka Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay inay socdaan dhismaha Maamul Goboleedyo si dalka looga hirgeliyo nidaamka Federaalka ah, iyo in dalka uu laga hirgeliyo doorashooyin 2016. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay cagaheeda isku taagtey isla markaasna ay Dowladda ka go’antahay in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo horumar iyo barwaaqo, oo booqashadiinana waxey nagu dhiiri gelineysaa inaan sii xoojino horumarka baaxada leh. Kulanka ayaa waxaa Dowladda iyo Qaramada Midoobay ay ku kala saxiixeen heshiis wada shaqeyn oo si toos ah u dhexmari doona Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey kulanka Wadatashiga Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa yiri “30kii Oktoober ayaa Dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan kala qeybgalay kulan wadatashi ah oo looga hadlayey xal u helidda dhibaatooyinka dhallinyarada iyo sidii looga wacyigelin lahaa Fikirka qaldan ee Xagjirnimada. Kulankan oo lagu qabtay Xarunta Dhalinyarada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Soomaaliyeed. Kulanka ayaa lagu bilaabay soo gudbinta fikirradaha waxaana halkaas lagu soo gudbiyey caqabadaha jira, sida sidii shaqooyin loogu abuuri karo dhalinyarada, xiriirka dowladda ay la leeyihiin, tayeenta Waxbarashada, hannaanka looga qeyb-galay dowlad dhisidda, iwm. Waxaan aad ugu faraxsanahay in doodu ay aheyd mid furan oo aan si wanaagsan u dhageysanayey dhammaan dooda iyo wadatashiga oo igu abuurtay rajo wanaagsan. Tanoo nooga wada baahan sidii aan si wadajir ah u wada taageeri laheyn dhalinta Soomaaliyeed oo u baahan fursado ay uga qeybgalayaan siyaasadda. Waxaan u ballanqaaday in Dowladdu ay dhiirigelineyso horumarka Dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaasna Radiyo Muqdisho iyo SNTV laga sii deyn doono wacyigelin iyo doodo dhalinyarada lagu awood siinayo. Kulankan ayaa kaalin weyn ka qaadanaya sidii dhalilnyarada Soomaaliyeed qaarkooda looga soo celin lahaa Fikirrada argagixisadaj.”
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlayey sii deynta todobo Hindi ah oo muddo afar sano ah loo heystay afduub ayaa yiri “Dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo kaashaneysa maamulka Gobolka Galgaduud iyo dadka deegaanka ayey ku guuleysatay in la soo daayo todobo qofood oo u dhashay Hindiya oo si afduub ah ay kooxaha burcad-badeedka u heysteen muddo afar sano ah. 30kii Oktoober ayaa toddobdan qofood diyaarad laga soo saaray degmada Dhuusamareeb. Burcad badeedda ayaa raggan muddo Afar sano ah ku heystay nawaaxiga degmada Xarardheere, iyagoo hore u sii daayay markabkii ay shaqaalaha ka ahaayeen kadib markii ay lacag madax furasho ah ka qaateen. Diyaarad qaas ah oo ay Dowladda Federaalku u dirtay raggan hindida ah ayaa waxey ka soo qaaday degmada Dhuusamareeb iyadoo shaqsiyaadkan si nabad ah loogu gudbiyey Dowladda Hindiya.”